Ikhabhathi epholileyo enombono wepanorama - I-Airbnb
Ikhabhathi epholileyo enombono wepanorama
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBredo
Ikhabhinethi yakhiwa ngo-2004, ixhotyiswe kakuhle, inombono omangalisayo wepanoramic kwaye ikufuphi neengoma ezinqumla ilizwe kunye namathambeka e-alpine.
Ngexesha lasehlotyeni ikwafumaneka ngokufanelekileyo ukuhamba ngebhayisekile yeentaba kuyo yonke intsapho. Ngolwazi oluthe kratya jonga le webhusayithi:
Bakwabonelela ngerenti yebhayisekile yasezintabeni.
Ikhabhinethi inekhitshi elincinci elinefriji, iwasha-dish kunye nesitovu / umpheki. Igumbi lokuhlala elinendawo yokutyela eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlala.
Amagumbi okulala amathathu. Ezimbini zineebhedi ezinkulu kunye nenye enebhedi ezigudileyo. Igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese, kunye nendlu yangasese eyahlukileyo efikelelekayo kwiholo yokungena.
Ukutyibiliza ekhephini kufuneka uhambe umgama oziimitha ezili-100 kuphela ngaphambi kokuba ubhinqe kwiskis sakho. Ukusuka apho kuya kufuneka uhambe malunga neemitha ezingama-400 ukufumana uthungelwano olukhulu lweengoma ezilungisiweyo.
Amathambeka e-alpine amalunga neemitha ezingama-900 kwaye kunokwenzeka ukuba ufike apho kwaye ubuye ngokutyibilika. Kungenjalo, ungaqhuba ujikeleze kwaye uhle uye ezantsi kwethambeka, apho uya kufumana indawo yokupaka, irenti ye-ski, i-pub kunye nevenkile yokutyela. Ukuqhuba kumalunga nemizuzu eyi-12.
Umbuki zindwendwe ngu- Bredo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ringsaker